Voahangy Rajaonarimampianina Hosamborina ihany koa ?
Niely ny resaka tany anaty tambajotran-tserasera omaly fa hosamborina i Voahangy Rajaonarimampianina, izay re fa tsy eto an-tanindrazana ka hamoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena.
Mpamakafaka politika “Efa marary ny vahoaka.”
Mbola manohana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina aho, hoy ny mpamakafaka politika, Moussa Soahily, saingy amin’ny maha olom-pirenena dia zoko ihany koa ny manao tombana ny governemanta ankehitriny.
Anto-bola amin`ny fifidianana depiote Mavesatra ho an`ny antoko sasany
Miteraka adihevitra taorian`ny famoahan`ny CENI ny tetiandrom-pifidianana ny fampiakarana ny vola alaina amin`ny kandidà ho solombavambahoaka.
Mbola Rajaonah Nadoboka eny Tsiafahy
Naiditra vonjimaika eny amin’ny Fonjan’i Tsiafahy ny mpandraharaha Mbola Joseph Rajaonah, taorian’ny fakana am-bavany azy teny amin’ny PAC (Poles Anti-Corruption) na ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly etsy 67 Ha omaly tolakandro.
Mahafaly Solonandrasana Lasa any Frantsa ?
Nitohivakana nanomboka ny talata teo ny fisamborana ireo voasaringotra rehetra tanatina raharaha fanondranana harem-pirenena, indrindra ny andramena tao anatin’ny fitondrana tetezamita.
Ramanana René Angatahin’ny “FCA Avaradrano” ho kandida depiote
Mpanao politika avy eny amin’iny faritra Avaradrano iny Atoa Ramanana René. Nangataka ny hiverenany hirotsaka ho kandida depioten’i Madagasikara hofidiana eny amin’ny distrikan’Antananarivo Avaradrano ny Klioba mpilalao baolina kitra “FCA Avaradrano”.
Ao anaty boky mena misy sori-dalana, hoy ny filoha Didier Ratsiraka, raha nivoy ny repoblika sosialista izay navadibadika ho tonga amin’ilay antsoina hoe « politique de l’humaniste écologiste » ny taona 1996. Nanana ny azy koa ny profesora Zafy Albert ary tsaroana ihany koa ny Madagasikara am-perinasan’ny filoha Marc Ravalomanana rava tao anatin’ny 7 taona. Raha ny zava-nisy teo amin’ny tantara no halalinina dia saika loharanon’ireo fipoahana krizy teto amin’ny firenena hatrany anefa izy ireny. Saika maro hatrany ireo mpisehatra politika nipoitra tampoka ary nilaza ho nanohana ireny vina ireny saingy ny nahagaga dia korontana sy fanonganam-panjakana hatrany no tohiny avy eo. Hita izany ohatra ny taona 1972, 1991, 2002 ary 2009. Satria tsy nahazo fahafaham-po tany amin’ireo nilazany ny fanohanany ve ireo mpanao politika efa hatramin’izany dia lasa mpanome vaovao ireo mpifanandrina ? Toa lasa mora amin’ny an-kilany avy eo ny namolavola paikady namotehana ny an-daniny. Raha ny mikasika ireo vina kosa no hiverenana dia saika hevitra nisavoana sy nitondra nofy lalina daholo satria tsy hita izay nahatanterahana azy fa toa santatry ny fitadiavan-tsezan’ireo mpanao politika rehefa akaiky fifidianana tahaka izao hatrany. Anisan’ny nanaitra, ohatra, ny fanambaran’ny filohan’ny fikambanana politika, Asandratro ny tanindrazako, Andrianina Rajoharison, ny fanohanany sahady ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina sy ilay vina IEM ny alahady teo. Hita ho isan’ny vina tsy nahoraka kosa anefa na izany aza ny an’ny antoko ADN, tarihin’ny filohany Edgard Razafindravahy tamin’ny taona 2017 izay nampitondrainy ny anarana hoe “Misia mazava”.